One In Three Women Who Ever Had A Baby Wet Themselves in Somali | Continence Foundation of Australia
One In Three Women Who Ever Had A Baby Wet Themselves in Somali
Maxay qabtaan muruqyada sagxada miskaheygu?
Dumarka xitaa dhalay hal ilmo ah oo kaliya ayaa aad uga sii dhow saddex meeloodooba in ka badan inay kaadi ka daadato oo ay isqooyaan, marka la barbardhigo dumarka aan wax carruur ah dhalin. Carruurta badan ee aad dhashaaba waxay keenaysaa inaad uga sii badan tahay inay kaadi kaa daadato oo aad isqoyso.
Waa maxay sababtay kaadi kaaga daadaneyso ka dib markaad ilmo dhasho?
Marka ilmo hoos ugu soo dhaqaaqo kanaalka dhalmada, wuxuu fidiyaa nerfayaasha iyo muruqyada kaadiheysta xira. Kuwan waxaa loogu yeeraa muruqyada sagxada miskaha, marmarka qaarkoodna waxaa looga tegi karaa iyagoo daciif ah, mana awoodaan inay ka ilaaliyaan kaadiheysta in kaadi ka daadato. Daadashada kaadidu waxay dhacdaa badanaa markaad qufacdo, hindhisto, waxqaado ama aad jimicsi sameyso. Waa ku dhif kaadiheysta in la dhaawaco marka la dhalayo, laakiinse muruqyada iyo neerfayasha ayaa badanaa la dhaawacaa, waxaanad u baahan tahay inaad sameyso tababarka muruqa sagxada miskaha si aad uga caawisid muruqyada inay mar labaad xoog yeeshaan.
Kaadi ka daadashadani iskeed ma isaga tegaysaa?
Haddii aad qabto wax kaadi ka daadasho ah, iskama tegayso haddii aad is ilowsiisid. Daadashada kaadida waxaa laga yaabaa inay istaagto haddii aad tababarto muruqyada sagxada miskahaaga, si ay kaaga caawiso inaad xooggaga dib u hesho. Haddii aadan dib u helin xoogga muruqada sagxada miskahaaga waxaa laga yaabaa inaad bilowdo isqoyntaada, isla marka muruqyada sagxada miskahaagu ay daciifaan da’a darteed.
Sidee bay u shaqeysaa kaadiheystaydu?
Kaadi haysto waa murug godan oo wax soo tuura. Si tartiiba ayuu kelyaha u buuxiyaa, waxayna qaadi karaan hal iyo bar ilaa laba koob oo kaadi ah (300-400 mls). Tuunbada kaadiheysta waxaa xira muruqyada sagxada miskaha. Markay kaadiheystu ay buuxdo waxaanad go’aansataa inaad kaadido, muruqyada sagxada miskaha ayaa debca markaad ku fariisato musqusha, kaadiheysta ayaa soo deysa kaadida. Ka dibna isla sidaas u “buuxisa una faaruqisa” wareega ayaa haddana bilowda.
Eeg sawirka sagxada miskaha. Muruqyada sagxada miskuhu waxay qabtaan waxyaalo badan, waxay:
caawiyaan xirida kaadiheysa, ferjiga (marinka hore) iyo afka marinka danbe); iyo
Caawiyaan heynta kaadiheysta, uterus (ilmogaleenka) iyo caloosha meelahooda caadiga ah.
Maxaa dhacaya haddii muruqyada sagxadeyda miskuhu ay daciif yihiin ka dib markaan ilmo dhalo?
Waxaa laga yaabaa inay kaadi kaa daadato markaad qufacdo, hindhisto, wax qaado, qososho ama aad jimicsi sameyso.
Waxaa laga yaabaa in aadan kontoroolin dhuusada.
Waxaa laga yaabaa inaad dareento rabitaan degdeg ah si aad u faaruqiso kaadiheystaada ama calooshaada.
Waxaa laga yaabaa in aadan u heysan taageero fiican kaadiheystaada, ilmogaleenkaaga ama calooshaada. Taageero fiican la’aanteed mid ama wax ka badan organada miskaha ayaa laga inay ku soo dhacaan ferjigaaga. Tan waxaa la yiraahdaa soo dhicida ama durkida unuga ama organka miskaha. Soo dhicidu ama durkidu waa wax caam ah oo ku dhaca qiyaastii hal dumar ah tobankii dumar ah ee jooga Australia.
Maxaan sameyn karaa si aan u joojiyo waxyaalahani inay dhacaan?
Tababar muruqyada sagxada miskahaaga (waxaan kuu sheegaynaa sida wax loo samaynayo hadhow).
Yeelo caaddada wanaagsan ee caloosha iyo kaadiheysta:
- cun furuutka iyo khudaarta;
- cab 1.5 – 2 litir oo cabitaana maalintii;
- musqusha ha aadin ‘lacala haddii’ maadaama ay tani yareynayso ilaa intay celin karto kaadiheystaadu; iyo
Ilaali muruqyada sagxada miskaha markaad fureyso mindhicirka. Si wanaagsan oo aad u fadhiisan karto waxaa weeye inaad saarto gacmahaaga bowdyahaaga iyo, cagahaaga oo u dhow musqusha, cidhbahaagana kor u qaad. Debci muruqyadaada sagxada miskaha si tartiib ahna u riix.
Miisaankaaga ku hey xadka saxda ah ee dhererkaaga iyo da’daada.
Sidee baan u daryeeli karaa muruqyada sagxada miskahayga ee daciifay?
Dhalida ilmaha ayaa laga yaabaa inay kala bixisay muruqyada sagxada miskahaaga. Wax kasta oo ah ficilka ‘hoos u riixida’ ah toddobaadyada ugu horeeya ka dib markuu ilmuhu dhasho ayaa laga yaabaa inay mar labaad kala bixiso muruqyada sagxada miskaha. Waad caawin kartaa si aad u ilaalisid muruqyada sagxada miskahaaga adoon hoos ugu riixeynin sagxada miskahaaga. Halkan waxaa ah waxoogaa fikrado ah oo ku caawinaya.
Iskuday inaad isku ururiso, kor u qaado oo aad qabato muruqyada sagxada miskahaaga ka hor intaadan hindhisin, qufucin, duufsan ama wax qaadin.
Lugahaaga isdhaafi oo si aad ah isugu dheji oo dhuujisan ka hor qufac ama hindhisaad kasta.
Qof la wadaag qaadista xamuulka culus.
Caddaadis ha isa saarin markaad isticmaaleysid calooshaada.
Ha sameynin jimicsiyada bood boodka.
Waxba malaha inaad hal mar kacdo habeenkii si aad u soo kaadido — musqusha ha aadin uun sababtoo ah waxaad u kacday ilmo.
Ku xooji muruqyada sagxada miskahaaga tababar.
Waa maxay muruqyada sagxada miskaheygu?
Waxa ugu horeeya oo ah in la sameeyo waa inaad ogaatid muruqyada aad u baahan tahay inaad tababarto.
Fadhiiso ama ku jiifso muruqyada bowdyaha, dabada calooshana debci.
Isu ururi wareega muruqyada ee ku hareeraysan marinka danbe sidii aad iskudeyeysid inaad joojiso dhuusida. Hadda debci muruqyadaan isu ururi sii daana laba jeer ilaa aad ka hubsato inaad heshay muruqyadii saxda ahaa. Iskuday inaadan isku soo wada ururin dabadaada.
Markaad ku fadhido musqusha si aad u faaruqiso kaadiheystaada, iskuday inaad joojiso socodka kaadida, ka dibna dib u bilow haddana. Tan same oo kaliya si aad u barato muruqyada ugu saxsan ee aad isticmaalayso— hal mar toddobaadkii oo kaliya. Kaadiheysataada waxaa laga yaabaa in aadan faaruqin kaadiheystaada sidii la rabay haddii aad joojiso oo aad dib u bilowdo socodkii kaadida intaa wax ka sii badan.
Haddii aadan dareemeynin ka duwanaan ururinta iyo kor u qaadida muruqyada sagxada misigta, ama haddii aadan gaabin karin socodka kaadidaada sidii laga hadlay ee 3 qodob, ama aad arkeysid galka xiniinyahaaga oo kor u laabma iyo qoodhaha sidii aan uga hadalnay qodobka 4, caawimaad weydiiso dhakhtarkaaga, fiisiyo teriba, ama kalkaalisada xejisashada kaadida iyo saxarada. Waxay kaa caawinayaan inay ka dhigaan in muruqyadaada sagxada miskuhu inay si sax u shaqeeyaan. Raga leh muruqyada sagxada miskaha ee daciifka ah waxay ka faa’iidi karaan tababarka muruqa sagxada misigta.
Hadda maadaama aad dareemeyso muruqyada shaqeynaya-
Isu ururi oo soo jiid muruqyada ku hareeraysan marinkaaga danbe iyo ferjigaaga isku mar. KOR uga qaad gudaha. Waa inaad yeelataa dareen ah inaad “qaadis” ah wakhti kasta oo aad isu ururiso muruqyada sagxada miskahaaga. Iskudey inaad u qabato si xooggan oo dhuujisan ilaa intaad ka tirinayso 8. Hadda, siidaa oo nasano. Waa inaad leedahay dareen cad oo ah “siideyn”.
Tan ku celi “isu ururi oo kor u qaad” ilaa inta ugu badan ee aad awoodid, ilaa xad dhan 8 ilaa 12 isu ururinood. Marka ugu horeysa ee aad bilowdo dhalida ilmahaaga waxaa laga yaabaa inaad jeclaato inaad ku bilowdo 3 isu soo ururinood oo kaliya, iyo ka shaqeena wax intaas ka sii badan toddobaadyada ku xiga ee yar.
Markaad xoogeysato, Iskuday inaad sameyso siyaalahan ah 8 ilaa 12 isu ururinood kiiba, iyadoo nasasho u dhaxeyso.
Samee qorshahan tababarka oo dhan (saddex meelood oo min 8 ilaa 12 isu ururinood ah) maalin kasta adoo jiifa, fadhiya ama taagan.
Markaad sameynayso tababarka muruqyada sagxada miskaha—
Neeftaada HA iskucelin;
Hoos HA isu riixin, isku ururi oo kaliya oo kor u qaad; iyo
HA isku dhuujin dabadaada ama bowdyahaaga.
U samee si tababarka muruqa sagxada miskahaaga
Isu soo ururin yar oo wanaagsan ayaa ka fiican kuwo badan oo aan fiicneyn! Haddii aadan hubin in aadan u sameynaynin isusoo ururinta si fiican weydiiso caawimaad dhakhtarkaaga, fiisiyoterigaaga, ama kalkaalisada la taliyaha ceshadka kaadida iyo saxarada.
Ka dhig tababarka qayb ka mid ah nolol maameedkaaga
Mar haddii aad baratay sidii aad u sameyn lahayd isusoo ururinta muruqa sagxada miskaha, waa inaad sameysaa badanaa. Maalin kasta ayaa ugu fiican, adoo siineya isusoo ururin kasta dareenkaaga oo buuxa. Sameyso wakhti joogta ah oo aad sameyso isusoo ururinta muruqa sagxada miskaha. Tan waxaa laga yaabaa inay noqoto:
ilmaha wax ka bedel;
ilmaha wax sii; ama
Waa fikrad wanaagsan inaad gasho caaddada nololeed ee dheer ee sameynta hal nooc oo ah jimicsiga muruqa sagxada miskaha wakhti kasta oo aad musqusha gasho, kadib markaad kaadido ama calooshaada furto.
Ka waran haddii aysan waxba hagaagin?
Waxyeelada muruqa sagxada miskaha waxaa laga yaabaa inay qaadato ilaa lix bilood inay ka fiicnaanto. Haddii aynaan waxyaaluhu fiicnaan lix bilood ka dib, la hadal dhakhtarkaaga, fiisiyoteribaaga, kalkaalisada la tallinta ceshadka kaadida iyo saxada.
Sidoo kale weydii dhakhtarkaga wixii caawimo ah haddii aad ogaato wax ka mid ah kuwan soo socda:
wixii kaadi ah ee kaa data;
u cararida si aad u gashid musqusha, si aad u kaadid ama aad u furtid calooshaada;
aadan awoodin inaad celisid markaad dooneysid;
aadan awoodin inaad kontoroosho dhuusada;
gubashada ama urka gudaha markaad kaadido; ama
Cadaadis isasaarida si aad u bilowdid socodka kaadida.